အရမ်းဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားဖြစ်ရပ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒါယကာတစ်ဦး - 7DAY THADIN
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက မဟာမွိုငျက မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီးဟာ ဆှမျးခံကွှတျောမူခဲ့ပွီး နှဈပေါငျးအတျောကွာမှ အခုလိုဆှမျးခံ ထှကျတျောမူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သပိတျပိုကျပွီး ဆှမျးခံထှကျလာတဲ့ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီးကို ပွညျသူအမြားအပွားက လာရောကျဖူးမြှျောခဲ့ကွပါတယျ။
လူ့လောကကွီး သောကမီးဝိုငျး၊ကပျဘေးတှဆေိုကျနခြေိနျ ဘုနျးတနျခိုးကွီးမားတဲ့ ဆရာတျောဘုရားကွီးတှေ အခုလို သပိတျပိုကျပွီး ဆှမျးခံ ထှကျလာတာကွောငျ့ ကပျရောဂါဆိုးကွီး မကွာခငျငွိမျဝပျတော့မှာဖွဈကွောငျး ပွညျသူတှကေ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
ယခုမှာတော့ ဒါယကာတဈဦးက ဘုနျးတနျခိုးကွီးမားတဲ့ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားဖွဈရပျတှကေို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ဆရာ တျောဘုရားကွီးဟာ ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး၊မိုငျးပဉျြးမွို့အနီး၊သုဝဏ်ဏသြံ တောငျပျေါမှာ သီတငျးသုံးခဲ့စဉျက သုဝဏ်ဏသြံတောငျပျေါမှ ပလောငျတိုငျးရငျးသားရှာအထိ နစေ့ဉျဆှမျးခံကွှတျောမူခဲ့ပါတယျ။
သာမနျလူတဈယောကျအနနေဲ့သှားလြှငျ သုဝဏ်ဏသြံတောငျပျေါမှ ပလောငျတိုငျးရငျးသားရှာအထိ အသှားအပွနျ(၆)နာရီကြျောကွာမွငျ့ သျော လညျး မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီးကတော့ ပုံမှနျ (၁၀း၃၀)နာရီတှငျ တောငျပျေါမှ ဆှမျးခံစကွှခြီပွီး (၁၁)နာရီထိုးတာနဲ့ တောငျပျေါသို့ ပွနျရောကျလာခဲ့တာဖွဈပါတ ယျ။
အဆိုပါထူးခွားဖွဈရပျအပွငျ တဈခွားသောဖွဈရပျတဈခုကွောငျ့လညျး မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီးကို အနီးနားရှိ ပလောငျလူမြိုးမြားက ကွညျညိုလေးစားသှားခဲ့ရပါတယျ။ ရစေီးအရမျးသနျလို့ ကြှဲတှတေောငျ ရမေကူးရဲသလို
ကူး တဲ့လူတိုငျးလညျးအ သကျ မရှငျတဲ့ ခြောငျးကို ဆရာတျောဘုရားကွီးက ဖွတျကူးသှားတာ ဖွဈပွီး ဖွတျကူးသှားပုံကို တဈရှာလုံးက မကျြစိနဲ့ကိုယျတိုငျမွငျတှခေဲ့ရကာ အခုလိုကွညျညိုသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီးဟာ အဆိုပါအခြိနျမှစပွီး ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၊မိုငျးပဉျြးမွို့အနီး သုဝဏ်ဏသြံတောငျမှ ရုတျတရကျ ပြောကျ ကှ ယျသှားခဲ့တာဖွဈကာ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးကမှ အခုလိုပွနျလညျထှကျပျေါလာပွီး ဆှမျးခံထှကျတျောမူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခရကျဒဈ.
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မဟာမြိုင်က မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှ အခုလိုဆွမ်းခံ ထွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သပိတ်ပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံထွက်လာတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ပြည်သူအများအပြားက လာရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူ့လောကကြီး သောကမီးဝိုင်း၊ကပ်ဘေးတွေဆိုက်နေချိန် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ အခုလို သပိတ်ပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံ ထွက်လာတာကြောင့် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး မကြာခင်ငြိမ်ဝပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ယခုမှာတော့ ဒါယကာတစ်ဦးက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားဖြစ်ရပ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးဟာ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊မိုင်းပျဉ်းမြို့အနီး၊သုဝဏ္ဏသျံ တောင်ပေါ်မှာ သီတင်းသုံးခဲ့စဉ်က သုဝဏ္ဏသျံတောင်ပေါ်မှ ပလောင်တိုင်းရင်းသားရွာအထိ နေ့စဉ်ဆွမ်းခံကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။
သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သွားလျှင် သုဝဏ္ဏသျံတောင်ပေါ်မှ ပလောင်တိုင်းရင်းသားရွာအထိ အသွားအပြန်(၆)နာရီကျော်ကြာမြင့် သော် လည်း မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ ပုံမှန် (၁၀း၃၀)နာရီတွင် တောင်ပေါ်မှ ဆွမ်းခံစကြွချီပြီး (၁၁)နာရီထိုးတာနဲ့ တောင်ပေါ်သို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတ ယ်။
အဆိုပါထူးခြားဖြစ်ရပ်အပြင် တစ်ခြားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်လည်း မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကို အနီးနားရှိ ပလောင်လူမျိုးများက ကြည်ညိုလေးစားသွားခဲ့ရပါတယ်။ ရေစီးအရမ်းသန်လို့ ကျွဲတွေတောင် ရေမကူးရဲသလို
ကူး တဲ့လူတိုင်းလည်းအ သက် မရှင်တဲ့ ချောင်းကို ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဖြတ်ကူးသွားတာ ဖြစ်ပြီး ဖြတ်ကူးသွားပုံကို တစ်ရွာလုံးက မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရကာ အခုလိုကြည်ညိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ အဆိုပါအချိန်မှစပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊မိုင်းပျဉ်းမြို့အနီး သုဝဏ္ဏသျံတောင်မှ ရုတ်တရက် ပျောက် ကွ ယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ အခုလိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပြီး ဆွမ်းခံထွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်.
Previous Article မိမိပိုင်နေအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို လှူဒါန်းခြင်း
Next Article နှလုံးလမ်းကြောင်း ကပြောတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်